Ogaden News Agency (ONA) – Isusoobixii Ciida Itoobiya oo In Lamabnuuco Qarka Usaaran, Sababta.
Isusoobixii Ciida Itoobiya oo In Lamabnuuco Qarka Usaaran, Sababta.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in ay kooxda TPLF ee talada wadanka marooqsatay ay aad uga walwashan yihiin maalmaha ciida ee sanadka cusub ee tirsaga Itoobiya, iyadoo dadwaynaha ree Itoobiya ay udiyaar garoobayaan ciida sanadka cusub ee Itoobiya ayay kooxda TPLF tu bilowday walaaca ku aadan dhalashada sanadka cusub ee Itoobiya.
Taliska wayaanaha ayaa sheegay in ay xaaladu si kale isu badali karto hadii ay hal goob ah isugu yimaadaan dad malaayiin ah, waxaana lafilayaa in ay magaalada Addis Ababa oo kaliya isugu soo baxaan in kabadan 2 Malyan oo shacab ah, kuwaas oo sida larumaysan yahay aan jacayl uqabin taliska wayaanaha.
Taliska wayaanaha ayaa sheegay si looga digtoonaado kacdoono waawayn oo dhaca xiliga ciida in ay ciidamadu udiyaar garoobaan amaanka magaalooyinka waawayn, sidoo kale taliska ayaa sheegay in ay maalmaha ciida howl galin doonaan diyaaradaha qumaatiga ukaca oo dhaqdhaqaaqa shacabka dusha kala socon doona.
Maalmaha ciida oo dunida inteeda kala aad looga soo dhaweeyo ayaa wadanka gumaysiga Itoobiya ka ah maalmo ladhibsado, wuxuuna taliska wayaanuhu qarka usaaran yahay in uu xaaraan kadhigo isusoobaxyada maalmaha ciidaha ah, isagoo aad uga baqaya in ay karkaarka waydaariyaan malaayiinta shacabka ah ee isu soobaxaysa.
Qoomiyadaha lagumaysto ee wadanka Itoobiya kudhaqan ayaa dhankooda uguntaday in ay is dhaafiyaan taliska macangaga ah ee wayaanaha, kaas oo aakhiro iyo aduunba seejiyay.
Siyaasiyiinta madaxa manaan iyo ururada bulshada ayaa dusha kala socda dhaq dhaqaaqa taliska wayaanaha iyo iskudayada uu kudoonayo in uu xukunka xaaraanta ah dheeraysto.